प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटार ‘भूमाफिया’को कब्जामा ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटार ‘भूमाफिया’को कब्जामा !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटार नै ‘भूमाफिया’को कब्जामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवासभित्रैका जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालय, कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको तथ्य फेला परेको छ ।
भूमिसुधार कार्यालयका घुस्या कर्मचारी र गिरोहले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई कब्जामा लिएका छन् । कब्जामा लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी अन्य निकाय बेखवर नै बने । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ । १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रका २ रोपनी १४ आना जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको फेला परेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार बालुवाटार र वरपरको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले छानविन समितिको प्रतिबेदन बुझाउँदै माफियालाई कारवाही गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘माफियालाई कारवाही भएन भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई नै बालुवाटारबाट सर्नु पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ’, पूर्वसचिवले भने ।